Maxxansa Fayyadamaa-galmaa'eetti galmee qindeessuu
Galmee hunda filahdu.
Dhangii - Fuula - Fuula filadhu.
Keewwatootni galmee keessaa hundi, hamma adda ba'anitti akka fayyadamaa-galmaa'etti maxxanfamu.
Keewwatoota maxxansa fayyadamaa-galmaa'e irraa hambisuu
Keewwatoota irra darbuu barbaaddu hunda filadhu, sana booda Dhangii - Keewwata - Galumsoota & Qubachiisuu filadhu.
Title is: Fayyadamaa-galmaa'e Maxxansuu